Adam Savage dia manamboatra Proton Pack 'Ghostbusters' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Adam Savage dia manangana fonosana Proton 'Ghostbusters'
Adam Savage dia manangana fonosana Proton 'Ghostbusters'
Iray amin'ireo no tadiavinay
by Trey Hilburn III Oktobra 10, 2021 336 hevitra
Mythbusters 'Adam Savage dia somary manam-pahaizana ary mpankafy sarimihetsika. Ka, mazava ho azy, izy dia Ghostbusters fanatisme. Tamin'ny fizarana farany an'ny Fitsapana, nandeha i Savage ary nanamboatra fonosana proton mba hanaovana ny sisa Ghostbusters fialonana eran-tany.
Mazava ho azy fa tena mila packe naorin'i Savage isika. Betsaka ny fonosana proton eny no vidiana ary afaka manamboatra ny anao aza ianao, saingy ny iray namboarin'i Savage dia mangataka ny fanontaniana hoe tena mandeha ve izany?
Ity fizarana an'ny notsapaina dia faritana toy ny:
Eo am-piandrasana ny Ghostbusters: Afterlife, Adam dia nanao replica Proton Pack aingam-panahy avy amin'ilay sarimihetsika, fenoina famenon-jiro mifangaro, effet de setroka ary greeblies fanampiny hanamboarany azy ho azy manokana amin'ilay prop icon. Ary tsara kokoa noho izany, nomena ny fidirana amin'ny iray amin'ireo prop prop horonantsary Proton Pack avy amin'ny Ghostbusters: Afterlife izay ampiasainy ho famaritana ny antsipirihany sy ny fiafarany. Toy izao no nivoahan'ny fanao Proton Pack Adon!
As Ghostbusters: Aorian'ny fiainana manatona, mitombo ny fiandrasana sy ny marketing. 1000 isan-jato no tsara ananantsika amin'izany satria, midika izany fa mahazo fampisehoana, kilalao ary sakafo junk marobe amin'ny marika GB isika!
Ahoana ny hevitrao momba ny fananganana fonosana proton an'ny Savage. Ampahafantaro anay amin'ny pejinay Facebook sy Twitter.